लोकतन्त्रको आवरणमा लुटतन्त्र : कमल थापा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले लोकतन्त्रको आवरणमा लुटतन्त्र कायम रहेको बताएका छन् । मिडिया नेपाल कञ्चनपुरले शनिबार महेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष थापाले जनस्तरमा सुधार नभएको बताउँदै जनताले राष्ट्रको परिवर्तनको अनुभूति गर्न नपाएको बताए ।
सरकारले एक वर्षमा केही काम गरेन : कोइराला
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले सरकार सर्वेसर्वावादतर्फ उन्मुख बनेको आरोप लगाएका छन् । सरकारले एक वर्षमा विकासका काम नगरेको उनको आरोप थियो ।
फोरम र राजपा नजिकिँदै
सरकार र डा. सीके राउत नेतृत्वको ‘स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन’ बीच भएको ११ बुँदे सम्झौताले संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीचको सम्बन्ध बलियो पार्ने देखिएको छ । यो सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनु केही दिन अघिमात्रै फोरमले औपचारिक रूपमा राजपालाई वार्ताका लागि एक पत्र पठाएको थियो ।
अधिकारीद्वयको सम्झनामा नेकपाको श्रद्धाञ्जली सभा
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षद्वयले दिवङ्गत नेता भरतमोहन अधिकारी र रवीन्द्र अधिकारीको योगदानको स्मरण गर्दै शोकलाई शक्तिमा बदल्न आग्रह गरेका छन् । नेकपाद्वारा बिहीबार आयोजित श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पूर्वउपप्रधानमन्त्री अधिकारी र हवाई दुर्घटनामा दिवङ्गत भएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अधिकारीसहित अन्य सात जनाले आफ्ना जीवन कालमा पु¥याएको योगदान स्मरण गरे ।
कार्यकाल लम्ब्याउने पक्षमा छैन : देउवा
नेपाली कांग्रे्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आपूm कार्यकाल लम्ब्याउने पक्षमा नरहेको बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा बिहीबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले पार्टीको अधिवेशन तोकिएको समयमा हुने जानकारी दिए ।
संसद्मा छाउपडीबारे छलफल
प्रतिनिधिसभा बैठकमा छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि संघीय तहदेखि स्थानीय तहसम्म विशेष अभियान सञ्चालन गरी कानून कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने भन्दै जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसद विन्दा पाण्डेले सो प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
सरकार भ्रष्टाचारमा डुबिसक्यो : जबरा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्तका अध्यक्ष पशुपतिशम्शेर जबराले वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारमा डुबिसकेको आरोप लगाएका छन् । विराटनगरमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै जबराले वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारमा डुबेको बताए ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन रोजेका ६६२ मध्ये २१५ सहसचिवको पदस्थापन गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीका अनुसार अझै ४४७ सहसचिवको पदस्थापन बाँकी छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रजातान्त्रिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने कार्य नेपाली कांग्रेसलाई स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । नेपाली कांग्रे्रेस भक्तपुर जिल्ला कार्यसमितिले सोमबार चाँगुनारायण नगरपालिका सुडालमा आयोजना गरेको प्रजातन्त्र सेनानी लीलाबहादुर पण्डितको प्रथम स्मृतिसभामा उनले सो विचार व्यक्त गरेका हुन् ।
राप्रपाको एक समूह संयुक्तमा समाहित
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट अलग भई पूर्वमन्त्री जयन्त चन्दसहित एक समूह राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त)मा आज समाहित भएको छ ।
माग पूरा नभए जनसंघर्ष : अध्यक्ष थापा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले जनसंघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन् । राप्रपाले उठाएका माग पूरा नभए चैत १ गतेदेखि पार्टी जनसंघर्षमा उत्रन बाध्य हुने उनले स्पष्ट पारेका हुन् ।
‘पार्टी सभापति कार्यकाल लम्ब्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ’
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले सभापति शेरबहादुर देउवाले १४ औं महाधिवेशन समयमा हुन नदिने रणनीतिमा लागेको आरोप लगाएका छन् । विराटनगरस्थित कोइराला निवासमा नेपाल प्रेस युनियनले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा कोइरालाले समय थप गरेर समयमै महाधिवेशन हुन नदिन लागिपरेको बताए । कार्यकाल एक वर्षमात्रै बाँकी भए पनि कार्यकाल लम्ब्याउन लागिरहेको उनको आरोप थियो । उनले भने, “सभापतिजी अरु दुई–अढाई वर्ष लम्ब्याउने रणनीतिमाा लाग्नुभएको छ ।”
महामन्त्री चन्दसहितका नेताले छोडे राप्रपा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री तथा पूर्वमन्त्री जयन्त चन्दसहित राप्रपाका १८ जना नेताले पार्टी परित्याग गरेका छन् । पार्टी एकीकरण प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पार्टी छोडेका उनीहरुले शनिबारबाट लागू हुनेगरी पार्टी परित्याग गरेका हुन् ।
प्रेसमाथिको हस्तक्षेप सह्य हुँदैन : देउवा
नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रेसमाथि हुने कुनै किसिमका हस्तक्षेप कांग्रे्रेसलाई सह्य नहुने बताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियन कास्कीको नवौं अधिवेशन तथा पुरस्कार वितरण समारोहको शनिबार पोखरामा उद्घाटन गर्दै उनले वर्तमान सरकार प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण गर्न उद्यत रहेको आरोप लगाए ।
राजपाद्वारा सरकारमा जान अस्वीकार
सरकारले राजपाको संविधान संशोधनको मागलाई पूरा नगरेकाले सरकारमा सहभागी हुन नहुने अडान ठाकुरको रहेको पार्टीका नेताले बताउने गरेका छन् । अध्यक्ष मण्डलमा सरकारमा जान हुने–नहुनेबीच विवाद भएको विषयलाई संयोजक महेन्द्र राय यादवले इन्कार गरेका छन् । यादवले भने, “ठाकुरजी हाम्रा आदरणीय नेता हुनुहुन्छ । हामी सरकारमा जाँदैनौं ।”